ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကို sarcoidosis အထူးကု၏အကူအညီဖြင့်ရေးသားပြုစုထားသည် Prof S. Birring, Consultant Respiratory Physician at Kings College Hospital, London and Prof L.P. Ho, Respiratory Physician at Oxford University NHS Foundation Trust.
အဆုတ်နှင့်အ Sarcoidosis ၏ function
တစ်ခါတစ်ရံအဆုတ် sarcoidosis ၏ရောဂါလက္ခဏာရုတ်တရက်စတင်ကြာရှည်ပါဘူး။ သည်အခြားလူနာမှာရောဂါလက္ခဏာတွေတဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်။
အဆုတ် sarcoidosis ၏ဘုံလက္ခဏာတွေပါဝင်သည်:
သငျသညျအတိုင်ပင်ခံကို 'Sarcoidosis ၏စင်မြင့်' 'သို့ sarcoidosis ခွဲခြားဖတ်လိမ့်မည်။ အဖြစ်မှန်၌ဤဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် Clinician ကမရှိသလောက်အသုံး technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။
အဆုတ် Sarcoidosis နှင့်အတူ Living
Sarcoidosis အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလူအပေါ်သက်ရောက်မှု - တစ်ဦးချင်းစီကိစ္စတွင်မူထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် sarcoidosis နှင့်အတူနေထိုင်နေသူတွေအတွက်အချို့ shared အတွေ့အကြုံတွေကိုရှိပါတယ်။
ဒါဟာ sarcoidosis နှင့်အတူလူနာ, (အတန်ငယ်) ပင်ပန်းခြင်းနှင့် lethargic ခံစားရကိုယ်အလေးချိန်သို့မဟုတ်အဖျားနှင့်ညဘက်ချွေးအတူခံရစေခြင်းငှါဘုံဖြစ်ပါတယ်။
It is important to make sure you eat healthily, pace yourself and talk to friends and family about your sarcoidosis. You should discuss your condition early on with your employer – use the SarcoidosisUK Leaflet အလုပ်ရှင်များအဘို့သတင်းအချက်အလက်.
Sarcoidosis ကြောက်တယ်နှင့်အထီးကျန်ခံစားလူနာစွန့်ခွာနိုင် - အစောပိုင်းစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ထောက်ခံမှုရှာကြာလော့။ ကျေးဇူးပြု အဆက်အသွယ် SarcoidosisUK သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထောက်ခံမှုအဘို့သင့်မိသားစုဆရာဝန်။
X-ray can giveapicture of lung abnormalities. Generally, if abnormalities are found, additional tests are performed to confirm any diagnosis.
မှန် CT scan (also called CAT scan or computed tomography) combines X-rays and computer technology to create detailed images of the inside of your body.
MRI Scan ဖတ် use magnetic fields and radio waves. They show some abnormal tissue clearer than CT scans. MRI is rarely used with the lungs but may be useful to check if other organs like the bones and heart are affected.